Uyilo lwangaphakathi lwezakhiwo zamanje zanamhlanje Interior ezindlini Bucharest Constanta - Noble Interior Design studio, ngokomakhi, umyili, ushishino, uyilo, amaxabiso
Izakhiwo zendawo zangaphakathi zendawo zokupaka - Yenza iindawo zokuhlala eziqhelekileyo
Kwisikhundla sepottoliyo bakhethwe iiprojekthi eziphambili zokupakisha zangaphakathi kwiindawo zokuhlala ezenziwe yiNobili Interior Design. Xa kuphunyezwa iiprojekthi zokwakha, abaqulunqi bethu bahlalutye ngokucokisekileyo iingcamango neemvakalelo ezichazwe ngumxhasi. Iiprojekthi zeprojekthi zangaphakathi ezilandelayo yikhadi lethu lebhizinisi, elisimelela ngaphezu kwanoma yimuphi umbhalo obhaliweyo namagama.
Funda ngaphezulu ...
Uyilo lwangaphakathi lweConstanta
Ulungiso lwangaphakathi lwangoku lweBucharest
I-design yangaphakathi yezindlu 3 Constanta amagumbi
Igumbi lokuhlala yangaphakathi ekamelweni lokuhlala
Isakhiwo sokungena ngaphakathi
Idizayini yangaphakathi ehlala kwindawo yokuhlala
I-Interior Design I-4 yangaphakathi ikwakhiwa kwamagumbi anamhlanje
Ingaphakathi yokuyila indlu ye-4 ngamagumbi
Igumbi lokungena kwindlu yokulala ngaphakathi kwegumbi le-3
Ikhasi le-1 kwi-2
Umyili wezakhiwo zobungcali uGabriela Nechifor
Iiprojekthi zengaphakathi zoplanyelwe izindlu
Uyilo lwangaphakathi lobuhle be-salon
Umyili wezakhiwo wangaphakathi
Indawo yokuhlala iipotifoliyo - Izakhiwo zezindlu zangaphakathi
iiprojekthiI-Braziv yangaphakathiI-Design Design PloiestiDesign Interior ClujInterior Design ConstantaDesign Interiors CraiovaBucharest yangaphakathi
Ukupakisha ihotele zangaphakathi
Iingcango zangaphakathi zaseItali
Isakhiwo sangaphakathi Galati
I-design yangaphakathi uBraila
Uyilo lwangaphakathi ePitesti
Ukutya kwendawo yangaphakathi
Uyilo lwangaphakathi lwezindlu zakudala
Iingingqi zokutyela zokutya
Ihotele yeNdlu yoPhakathi
Izitolo zokungenisa ngaphakathi
Ulungiso lwangaphakathi lwezinwele
Intengo yoyilo lwangaphakathi
Wethu umyiliBlog Ifenitshala yaseNtaliyanecommercial-Iehotele zangaphakathiiimpahla-Ikhulu kunye neileyili-Ingcango zangaphakathi eItali- I-Ditre Italia zokulalaIiprojekthi ze-3d-Installation Galati- Iinkonzo zaseburhulumenteni zeBraila-Inkonzo zangaphakathi kwiPitestiUkutya kwendawo yangaphakathiPortfolio yezindlu-Ukuhlalisa izindlu zangaphakathi zangaphakathi-Kwazisa izindlu zangaphakathi zangokuKwiPorfolio-Indlela yokutya yangaphakathi-Inkonzo yangaphakathi Ihotele-Gcina izakhiwo zangaphakathi-Kwazisa i-hairdresser yangaphakathiiinkonzo-Cwangcisa ingaphakathi lwakhiwo
Xa ubeka indlu, kubalulekile ukucinga malunga nokuyila zonke iindawo ukuze ufumane intuthuzelo ephezulu kwisithuba esincinane. Ukongeza, ingaphakathi lamagumbi kufuneka ivumelane kwaye ngexesha elifanayo lisebenza kwaye likhululekile. Ngalo njongo i-design ye-design ye-3 okanye i-3 iya kuzaliswa. Unokujonga iiprojekthi zemihlaba yangaphakathi eyenziwe yinkampani yethu yokwakha, i-style yase-Constanta, iBucharest, Brasov, ePloiesti. Ingcamango yoyilo lwangaphakathi lendawo ingenziwa ngabaqulunqi kunye nabaqulunqi bangaphakathi. Into ephambili ayiyikubalahleka iinkcukacha ezincinci ezenza umehluko phakathi koyilo lwangaphakathi oluyimpumelelo kunye neprojekthi yoyilo. Iprojekthi yoyilo lwangaphakathi lendawo lixhomekeke kumlinganiselo omkhulu ngobukhulu kunye nokufumaneka kwendawo yokuhlala. Izindlu ezimbini okanye ezintathu zokulala ziquka iiprojekthi ezihlukileyo ngokupheleleyo. Njengomthetho, indlu iyahlotshiswa ngemibala ekhanyayo ngokubonakalayo yandisa emagumbini. Ubukho beendawo zokulala ezimbini kwindlu livumela umbutho okhululekile kakhulu kwiindawo eziyimisebenzi ebalulekileyo. Ngokuqhelekileyo igumbi linikezelwe kwigumbi lokuphumla kunye nezinye zokulala. Ngendlela, igumbi lokuhlala linokudibaniswa neofisi kuba alihlali ndawo. Abanikazi bamagumbi amathathu okulala bayaba nethamsanqa, kuba banokwazi ukuqonda nayiphi na ingcamango yokuyila ngaphakathi. Indawo yokuhlala ikuvumela ukuba uyihlobise indlu kunye nefenitshala, izesekeli kunye nezinye izinto zangaphakathi ngelixa uhlonipha imbono efunwa ngayo. Ikamelo ngalinye lingaveliswa ngokwahlukileyo okanye sinokuyilungiselela indlu ngendlela efanayo. Kwiindawo zokuhlala ezintathu kwigumbi eliseklasini, iiholo ziyancinci, kodwa le ngxaki inokupheliswa ngokubonakalayo ngokusebenzisa izinto zokugqiba kunye nezinto ezifanelekileyo zokuhlobisa. Indifernet unendawo yokuhlala eGalatia, eBraila, eTulcea okanye eBacau, eSuavaava, Iasi, eBuzau sinemibono kunye nezicwangciso ezisebenzayo kuyo nayiphi na isitayela sokwakha esivunywe ngumxhasi. Ukufumana iinkcukacha ezongezelelweyo malunga neenkonzo zangaphakathi zomsebenzi wangaphakathi kunye nexabiso, nceda u tyelele icandelo leNkonzo intengo yoyilo lwangaphakathi .
Udidi lweProjekthi zakhiwo zangaphakathi